Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDallas
Unyaka wonke, isilwanyana esinobubele, sabucala, siyaphumla. Ukusetwa kwelizwe apho ubumfihlo bugcwele. I-156 yeehektare zeLizwe laseMid Michigan elineehektare ezili-10 ngasese [INTSAPHO] yechibi. Ukuqubha okukhulu, ukuloba / ukuloba emkhenkceni, i-snorkeling, ukukhwela intaba. Igqibelele kwiintsapho ezitshatileyo. Abantwana soze bakruquke. Uninzi olongezelelweyo.
Umrhumo wesilwanyana yi-$35/isilwanyana sasekhaya ngokuhlala, nceda uqhagamshelane nomnini malunga nezilwanyana zasekhaya.
Igumbi lamaqela afana noManyano lweSapho, ukuphuma kweQela, iiNdibano zeHolide, iMpelaveki yabahlolokazi beDeer, uMbulelo, iKrisimesi, uNyaka oMtsha!
Le yindawo yokubalekela kwilizwe losapho lonke. Azikho ezinye iindlwana echibini! Umnini ubonelela ngezikhephe ezi-2 zokubhexa, iikayak ezi-2, kunye nesikhephe esinamavili esibheqa. Ungabukela abantwana bakho bequbha ukusuka kwigumbi lokuhlala okanye ekhitshini. Idokhi enkulu isuka kunxweme olunesanti kwaye inika indawo yokuba abantwana batsibe emanzini kwelinye icala kwaye izikhephe zibotshelelwe kwelinye icala.
Ukuloba ngamanzi amnandi angakholelekiyo, ukusuka kwisikhephe okanye ukuloba komkhenkce. Ekubeni zingekho ezinye izindlu kweli chibi kufana nokuba ningabantu bokuqala ukuloba apho. Ichibi lineBass yoMlomo omkhulu, iPike yaseMntla, iBlue Gills, kunye neCrappies.
Ngokubeka iliso, abantwana okanye abantu abadala banokuba nexesha elimnandi lokudlala nge-snorkeling kwaye babone iintlanzi ezininzi kunye nofudo. Awekho amanye amaphenyane echibini anokukhathazeka ngawo.
5.0 ·Izimvo eziyi-85
5.0 · Izimvo eziyi-85
Nangona le propathi ibucala ngokupheleleyo kwaye uya kuziva ngathi uphumile kwindawo engekhoyo, yisiqingatha semayile ukuya edolophini. ISheridan yidolophu encinci enqabileyo kodwa inevenkile ethengisa ukutya, ivenkile yedola, izikhululo zegesi kunye nesibhedlele.
Umbuki zindwendwe ngu- Dallas
Umnini ulawula ipropati kwaye uhlala kwindawo kwaye uyafumaneka ukuba kuyimfuneko. Umnini uza kubulisa iindwendwe kwaye abanike isishwankathelo sepropati.